मौसम परिवर्तनको प्रागैतिहासिक। जब मीथेनले मौसमलाई नियमित गर्‍यो नेटवर्क मौसम विज्ञान
मौसम परिवर्तनको प्रागैतिहासिक। जब मीथेन मौसम नियमित
यो सँधै भनेको छ मौसम परिवर्तन अपेक्षाकृत आधुनिक छ, अधिक जसो वायुमण्डलमा ठूलो ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनको कारणले हुन्छ मीथेन र CO2, औद्योगिक क्रान्ति पछि मानिसहरु द्वारा। यद्यपि तपाईले के सोच्नुहुन्छ यदि मैले तपाईलाई भने कि अरबौं बर्षदेखि पृथ्वी निर्माण भएदेखि यता अन्य जलवायु परिवर्तन भएको छ?
पृथ्वीको वातावरणीय जत्तिकै आज जस्तो छैन। यो विभिन्न प्रकारका रचनाहरूको माध्यमबाट आएको छ। मौसम परिवर्तनको प्रागैतिहासिक भनेको के हो?
1 जब मीथेन मौसम नियमित
2 ग्रीनहाउस एक आदिम वातावरण को प्रभाव
3 मिथेनको भूमिका र कुहिराहरूले यस ग्रहलाई शान्त बनायो
4 थर्मोफिलिक मेथेनोजेन
5 "एन्टी ग्रीनहाउस" प्रभावको कुहाक
6 मिथेन युगको अन्त्य
जब मीथेन मौसम नियमित
झन्डै २.2.300 अरब वर्ष पहिले, अनौठो सूक्ष्मजीवहरूले तत्कालीन "युवा" ग्रह पृथ्वीमा नयाँ जीवन सास गरे। यो साइनोबाक्टेरियाको बारेमा छ। तिनीहरूले पृथ्वीलाई हावाले भरिदिए। यद्यपि यो विश्वास गरिन्छ कि यो समय भन्दा धेरै पहिले, एकल कोशिकीय जीवहरूको अर्को समूहले यस ग्रहलाई आबास दिन्थ्यो र यसलाई बस्न योग्य बनाउन सक्थ्यो। हामी मेथेनोजेनको बारेमा कुरा गर्छौं।
मीथेनोजेन एकल कोशिका जीवहरू हुन् जुन केवल परिस्थितिमा बाँच्न सक्छ त्यहाँ कुनै अक्सिजन छैन र तिनीहरूले मिथेनलाई संश्लेषण गर्छन् उनीहरूको चयापचयको बेला फोहोर उत्पादनको रूपमा। आज हामी केवल रुमेन्ट्सको आन्द्रा, तलछटको मुनि र ग्रहमा अक्सिजन नभएको ठाउँमा अन्य स्थानहरू जस्ता ठाउँमा मिथेनोजेनहरू फेला पार्न सक्छौं।
हामीलाई थाहा छ, मिथेन एउटा हरितगृह ग्यास हो कार्बन डाइअक्साइड भन्दा २ times गुणा बढी तातो राख्दछ, त्यसैले यो परिकल्पना छ कि पृथ्वीको पहिलो दुई अरब वर्ष को लागी, mehanogens शासन गर्‍यो। यी जीवहरूले संश्लेषित मिथेनको कारण ग्रीनहाउस प्रभावले सम्पूर्ण ग्रहको मौसममा ठूलो प्रतिक्रियाहरू ल्यायो।
आज, मिथेन केवल १० बर्षसम्म वातावरणमा अक्सिजनको उपस्थितिको कारणले रहन्छ। यद्यपि, यदि पृथ्वीको वातावरणमा अक्सिजन अणुहरूको अभाव छ भने, मिथेन लगभग १०,००० बर्षसम्म रहन सक्छ। त्यस समयमा सूर्यको प्रकाश अहिलेको जस्तो शक्तिशाली थिएन, त्यसैले पृथ्वीको सतहमा पुग्ने र ग्रहलाई न्यानो पार्ने विकिरणको मात्रा त्यति कम थिएन। यसैले, ग्रहको तापक्रम बढाउन र बस्न योग्य वातावरण सिर्जना गर्न, तातो जालमा मिथेन आवाश्यक थियो।
ग्रीनहाउस एक आदिम वातावरण को प्रभाव
Earth. billion अरब वर्ष पहिले जब पृथ्वीको गठन भएको थियो, सूर्यले आज के गर्छ त्यसको 4.600०% बराबर ज्योति प्रदान गर्‍यो। त्यसकारण, पहिलो बरफ युग भन्दा पहिले (करिब २.70 अरब वर्ष पहिले) वातावरण पूर्णतया हरितगृह प्रभावमा निर्भर थियो।
मौसम परिवर्तन विशेषज्ञहरूले सोचे अमोनियामा ग्रीन हाउस ग्यासको रूपमा जसले आदिम वातावरणमा ताप कायम राख्दछ, किनकि यो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस ग्यास हो। यद्यपि वायुमण्डलीय अक्सिजनको अभावमा सूर्यबाट आएको अल्ट्राभायोलेट विकिरणले द्रुत गतिले अमोनियालाई नष्ट गर्दछ, त्यसबेला मिथेनलाई प्रमुख ग्यास बनाउँदछ।
वातावरणमा तातो योगदान र ग्रीन हाउस प्रभावको लागि हामी CO2 पनि थप्छौं। त्यतिन्जेल, उसको एकाग्रता धेरै कम थियो, त्यसैले यो ग्रीन हाउस प्रभाव को कारण हुन सक्दैन। CO2 मात्र ज्वालामुखीबाट प्राकृतिक रूपमा वायुमण्डलमा उत्सर्जित गरिएको थियो।
ज्वालामुखीहरूले सीओ २ र हाइड्रोजन दिए
मिथेनको भूमिका र कुहिराहरूले यस ग्रहलाई शान्त बनायो
प्रारम्भिक मौसम नियन्त्रित गर्न मिथेनको भूमिका करीव 3.500. billion अरब वर्ष पहिले सुरु भएको थियो, जब मिथेनोजेनहरूले समुद्री सतहहरूमा मिथेन ग्यासलाई फोहोर उत्पादनको रूपमा संश्लेषण गरे। यो ग्यासले इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमको विस्तृत क्षेत्रमा सूर्यबाट ताप फक्र्यो। यसले अल्ट्राभायोलेट विकिरणको पारित गर्न अनुमति पनि प्रदान गर्‍यो, त्यसैले यी कारकहरूमध्ये अवस्थित CO2 को साथ जोडिए, तिनीहरूले ग्रहलाई बस्न योग्य तापमानमा राखे।
मीथेनोजेनहरू उच्च तापमानमा राम्रोसँग बाँचे। तापक्रम तीव्र भएपछि पानी चक्र र चट्टानको क्षति बढायो। चट्टानहरु को क्षति को प्रक्रिया, वातावरण बाट CO2 निकाल्छ। धेरै वातावरणमा मिथेन र CO2 को एकाग्रता बराबर भयो।
वातावरणको रसायनशास्त्रले मिथेन अणुहरूलाई पोलीमराइज हुन पुर्‍यायो (मिथेन अणुहरूका श्रृ cha्खलाहरू एकसाथ जोडेको) र जटिल हाइड्रोकार्बनहरू बनाउँदछ। यी हाइड्रोकार्बनहरू कणहरूमा कन्डेन्स हुन्छन् जुन उच्च उचाईमा, तिनीहरूले सुन्तला झुम्का गठन गरे। जैविक धूलोको यो क्लाउडले ग्रीनहाउस प्रभावको लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्‍यो घटना सौर विकिरणबाट देखिने बत्तीलाई अवशोषित गरेर र यसलाई अन्तरिक्षमा पुनः उत्सर्जित गर्‍यो। यस तरिकाले यसले ग्रहको सतहमा पुग्न तापको मात्रा घटायो र जलवायुलाई चिसो र मीथेनको उत्पादनलाई ढिला बनाउनमा योगदान पुर्‍यायो।
थर्मोफिलिक मेथेनोजेनहरू ती हुन् जुन उच्च तापमानको दायरामा जीवित छन्। यस कारणले गर्दा, जब हाइड्रोकार्बन धुंध गठन गरिएको थियो, विश्वव्यापी तापक्रम चिसो र कम भएपछि, थर्मोफिलिक मेथेनोजेनहरू त्यस्तो अवस्थामा बाँच्न सकेन। चिसो मौसम र एक हानिकारक थर्मोफिलिक मेथेनोजेन जनसंख्याको साथ, ग्रहको अवस्था परिवर्तन भयो।
वातावरणले मिथेन मात्र मिथेन सांद्रता यति माथि राख्न सक्थ्यो वर्तमानसँग तुलनात्मक गतिमा उत्पन्न गरिएको थियो। यद्यपि हाम्रो औद्योगिक क्रियाकलापमा मिथेनोजेनले मानिससँग त्यति मिथेन उत्पादन गर्न सकेन।
मिथेनोजेनहरूले मूलतः हाइड्रोजन र CO2 मा फिड गर्दछ, बेकार उत्पादको रूपमा मिथेन उत्पादन गर्दछ। केहि अरूले कार्बनिक पदार्थको एरोबिक गिरावटबाट एसीटेट र बिभिन्न अन्य यौगिकहरू खान्छन्। त्यसकारण, आज, मेथेनोजेनहरू तिनीहरू केवल रुमेन्टको पेटमा फस्टाउँछन्, माटो जसले बाढीले धान क्षेत्र र अन्य anoxic वातावरण अन्तर्निहित। तर आदिम वायुमण्डलमा अक्सिजनको अभाव भएकोले ज्वालामुखीले उत्सर्जित सबै हाइड्रोजन समुद्रमा भण्डार गरिएको थियो र मेथेनोजेनहरू प्रयोग गर्थे किनभने यसमा पानी बनाउन अक्सिजन थिएन।
"एन्टी ग्रीनहाउस" प्रभावको कुहाक
सकारात्मक प्रतिक्रियाको यस चक्रको कारण (उच्च तापक्रम, थप मेथेनोजेन, अधिक मीथेन, थप ताप, थप तापक्रम ...) ग्रह यती तातो ग्रीनहाउस भयो कि केवल थर्मोफिलिक सूक्ष्मजीवहरूले यस नयाँ वातावरणमा अनुकूलित गर्न सके। यद्यपि मैले अघि नै भनें कि हाइड्रोकार्बनबाट धुवाँ गठन गरिएको थियो जसले घटना अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन निकालेको थियो मौसम चिसो बनाउँदै। यस तरिकाले, मीथेन उत्पादन रोकियो र तापमान र वातावरणीय संरचना स्थिर हुन थाल्नेछ।
यदि हामी मिस्टहरू कि संग तुलना टाइटन, शनिको सब भन्दा ठूलो उपग्रह, हामी हेर्छौं कि यसको पनि हाइड्रोकार्बन कणहरूको बाक्लो तहसँग मिल्दोजुल्दो सुन्तला रंग छ, जुन मिथेनले सूर्यको किरणले प्रतिक्रिया गरेपछि गठन हुन्छ। यद्यपि हाइड्रोकार्बनको त्यो लेतले टाइटनको सतह -१179 degrees डिग्री सेल्सियस बनाउँछ। यो वातावरण पृथ्वीको सम्पूर्ण ईतिहासमा भन्दा चिसो छ।
यदि पृथ्वीको हाइड्रोकार्बन बादल टाइटनको घनत्वमा पुगेको भए, यसले मिथेनको शक्तिशाली ग्रीनहाउस प्रभावलाई रोक्न पर्याप्त सूर्यको प्रकाशलाई पराजित गर्न सक्दछ। ग्रहको सम्पूर्ण सतह जमेको हुने थियो, जसले गर्दा सबै मेथनोजेनहरू मारिए। टाइटन र पृथ्वी बिचको भिन्नता यो हो कि शनिको यस चन्द्रमा न सीओ २ छ न पानी, त्यसैले मीथेन सजिलैसँग वाफ हुन्छ।
टाइटन, शनिको सब भन्दा ठूलो उपग्रह
मिथेन युगको अन्त्य
मिथेनबाट बनेको कुहिर सधैंको लागि रह्यो। प्रोटेरोजोइक र मीथेनले किन तिनीहरू भएको कारण वर्णन गर्न सक्ने त्यहाँ तीन हिमनदीहरू छन्।
पहिलो हिमनदीलाई हरुनियन हिमनदी भनिन्छ र यसको हिमनदीय निक्षेप अन्तर्गत फेला परेका सबै भन्दा पुरानो चट्टानहरूको अन्तर्गत त्यहाँ युरेनेनिट र पाइराइटको डिट्रट्रस हुन्छन्, दुई खनिजहरूले वायुमण्डलीय अक्सिजनको एकदम कम स्तर संकेत गर्दछ। यद्यपि हिमाली तहहरूको माथि, रातो रातो बलौटे ढुstone्गा अवलोकन गरिन्छ जसले हेमाटाइट, खनिजमा बनेको हुन्छ अक्सिजन युक्त वातावरण। यी सबैले संकेत गर्दछ कि ह्युरोनियन हिमनदी ठीक त्यस्तै भयो जब वायुमण्डलीय अक्सीजनको स्तर पहिलो पटक चम्किरहे
अक्सिजन, मेथोजेन र अन्य एनारोबिक जीवहरूमा समृद्ध यस नयाँ वातावरणमा कुनै समय यस ग्रहमा प्रभुत्व जमाएको, बिस्तारै हराउँदै गयो वा झन् बढी प्रतिबन्धित बासस्थानहरूमा सीमित देखिएको थियो। वास्तवमा, मिथेन एकाग्रता आजको तुलनामा उस्तै वा उच्च नै रहेको भए, यदि अक्सिजनको स्तर कम राखिएको भए।
यसले पृथ्वीमा प्रोटेरोजोइकको बखत किन वर्णन गर्दछ, त्यहाँ लगभग १. billion अरब वर्षको लागि कुनै हिमनदीहरू थिएनन्यद्यपि सूर्य अझै कमजोर थियो। वायुमण्डलीय अक्सिजन, वा विघटित सल्फेटमा दोस्रो वृद्धिले मिथेनको सुरक्षात्मक प्रभावलाई घटाएर हिमनदीय एपिसोडहरू पनि निम्त्याउने सम्भावना अनुमान गरिएको छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, पृथ्वीको वातावरण आजको जस्तो पहिला कहिल्यै भएको थिएन। यो अक्सिजन रहित भएको थियो (आज हामीले बाँच्नको लागि अणु) र जहाँ मिथेनले हावापानीलाई नियन्त्रण गरी ग्रहमा प्रभुत्व जमाए। यसबाहेक, हिमनदी पछि, अक्सिजन एकाग्रता बढेको छ जब यो स्थिर र वर्तमानको बराबर हुँदैन, जबकि मिथेन कम प्रतिबन्धित स्थानहरूमा कम गरिएको छ। वर्तमानमा, मानव क्रियाकलापहरूबाट उत्सर्जनका कारण मीथेनको एकाग्रता बढ्दै छ र ग्रीनहाउस प्रभाव र वर्तमान मौसम परिवर्तनमा योगदान गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » मौसम परिवर्तन » मौसम परिवर्तनको प्रागैतिहासिक। जब मीथेन मौसम नियमित
स्पेनको ग्लोबल वार्मि .को कारण समुद्री तटमा स्थिरता छ
रेफरेस्टम, पुन: स्थापनाको माध्यमबाट मौसम परिवर्तन विरूद्ध लड्न एक अनुप्रयोग